Maxay tahay sababta maanta loo xiray goobaha ganacsiga ee Jowhar?. – Bulsho News
Maxay tahay sababta maanta loo xiray goobaha ganacsiga ee Jowhar?.
Jowhar-KNN-Maamulka Hirshabeelle ayaa amar ku bixisay in aan la furi karin Goobaha Ganacsiga ee ku yaala Jowhar, kadib markii xubno ganacsato ah Al-shabaab ugu yeereen degmada Aadan-yabaale oo ka tirsan Sh/dhexe, kuwaas oo ku sugnaa Magaalada Jowhar.
Lama oga sababta ganacsatadaas loogu yeeray, balse waxaa hubanti ah in Al-shabaab canshuur ka qaadaan ganacsatada magaalada jowhar.
Sidoo kale, waxaan la ogeyn talaabada kale ee uu Maamulka Hirshabeelle qaadayo haddii xubnahaas Shabaab jira ay soo laabtaan.